Shiinaha 1000mlml warshad dhalada soodhada ka sameysan ee aan leedhka lahayn iyo soo saarayaasha | Muraayadda Honghui
Dhismaha Shaqada culus:
Dhalooyinka dhalada ah ee dib loo dabooli karo ayaa la sameeyay si ay u sii socdaan. Waxay ka samaysan yihiin muraayad waarta oo bixisa iska caabin ka sarreeya saamaynta iyo isbeddelka heerkulka. Xiritaanka silig ahama iyo silsiladaha polypropylene waxay bixiyaan iska caabin miridh fiican mana jabin doonaan ama diidi doonaan sida chrome.
Badbaado Adiga Iyo Dunida:
Waxyaabaha loo isticmaalo samaynta dhalooyinkeenna waa 100% aan sun ahayn, dib loo isticmaali karo oo ammaan u ah deegaanka. Waxay yihiin bilaash BPA, bilaa macdanta 'free' iyo 'phthalates' taas oo ka dhigaysa iyaga xalka kaydinta oo badbaado leh marka la barbar dhigo bacda. Adiga oo isticmaalaya dhalooyinkan dhalada ah ee dib loo isticmaali karo, waxaad jareysaa isticmaalka balaastiga gurigaaga.
Badbaadinta & Kaadida Cadaynta Kaadhka:
Dhalada dhaladayada leh ee joojiyaha leh waxay kuu ogolaaneysaa inaad keydiso saliidaha, cabitaanka iyo dareere kasta oo kale si aamin ah adigoon ka walwalin daadashada qashinka. Xiritaanka isku-xirku wuxuu bixiyaa ilaalinta hawo-qaboojinta dareerayaasha, taas oo ka dhigaysa xalka ugu habboon ee kaydinta khamriga, dhir udgoon iyo udgoon
AMMAANKA, LEAKPROOF CAP: Dhalo kasta oo Dhalo ah waxay la timaadaa caag anfac leh iyo istaag silikoon ah oo si adag u xidhi doonta dhaladaada Xirmooyinka hawadeena hawadu waxay xaqiijinayaan in cabitaanadaadu aysan oksijiyeyn doonin oo ay sii ahaan doonaan kuwo cusub oo dhadhan badan. Koofiyadu way fududahay in la soo saaro oo la xidho.
KU DHAQMEYN ISTICMAAL BADAN: U isticmaal dhaladaada dhalada ah mashiinka wax lagu keydiyo si aad ugu keydiso saliidaha, kefir, cabitaanada, kombucha, Vinegar, Beer, Water ama Soda. Ku dhex dabool daboolka hawada leh si aad u ilaaliso una ilaaliso cusub ee cabbitaannada iyo cabbitaannada aad ugu jeceshahay.
WAQTIGA LAGA HELI KARO, SOO SAARAY: Imaatinka, Dhalooyinkaas Aruufka waxaa laga sameeyaa muraayad adag oo nadiif ah; ku habboon muddo dheer, adeegsi soo noqnoqda. Naqshadeena qoorta ee cidhiidhiga ahi waxay u oggolaaneysaa si sahlan oo loo daadiyo iyada oo aan loo baahnayn daadin. Ma jiro wax kale oo ka fiican!
ISTICMAAL ISTICMAAL HALIS AH: Dhammaan dhalooyinkeena sare ee lulaya waa BPA, sun, kiimiko iyo sunta rasaasta. Hadda waad keydin kartaa saliidahaaga, cabitaannadaada ama biyahaaga adigoon ka walwalin faddarayn. Waxaa lagu heli karaa qayb ka mid ah 6, waxaan hubinay inaad haysato dhalooyin ku filan oo aad ku isticmaali karto.
AQOONSIGA CARRUURTA-WAALIDKA: Iyada oo leh muraayad aad u xoog badan oo qaro weyn leh, Dhaladayada Flip Top waxaa loo dhisay si loogu bixiyo caabbinta ugu sareysa ee isbeddelka heerkulka iyo saameynta shilalka. Si aad u nadiifiso, si fudud dhaladaada ugu dhig weelkaaga weelka lagu dhaqo.
Hore: 1000ml dhalada cabitaanka galaaska cad
Xiga: Dhalada cabitaanka cad ee dhalada
Dhalooyinka Sharaabka Jumlada
Dhalo Carbonated Beverage
Dhalooyinka Cabitaanka Muraayadaha
Dhalooyinka Khamriga Cabitaanka Jumlada
Dhalada Biyaha ee Cabitaanada Kaarboon-ka
150ml dhalo cabitaan cad oo cilmiyaysan
1000ml ~ 750ml dhalada cabitaanka daboolka caaga ah
500ml dhalada cabitaanka koofiyadda